William Sadler – Cast – Channel Myanmar
Man onaLedge(2012) Man onaLedge(2012) ((နငျးကနျလနျးတဲ့ကားမို့ Blu-Ray 1080p 5.1 CH, Blu-Ray 720p တို့ဖွငျ့ တငျဆကျပေးထားပါသညျ။)) ခေါငျမိုးစှနျးပျေါကလူတဈယောကျ သောငျးပွောငျးထှလေီလှတဲ့ လူ့လောကမှာလူပေါငျးမြားစှာကို ထောငျနှုတျခမျးနားမဟုတျတဲ့ တိုကျခေါငျမိုးနှုတျခမျးနားရောကျစတေဲ့ကိစ်စတှအေမြားကွီးရှိပါတယျ.... ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ဇာတျလိုကျကြျော Avatar မငျးသား Sam Worthington တဈဖွဈလဲ နဈကတျစီဒီဆိုတဲ့လူဟာ ရုစဗဲ့ဟိုတယျရဲ့ ၂၁လှာကနခေုနျခဖြို့လုပျပါတယျ ......သူ့ကွညျ့ရတာ ဒီလိုခုနျခဖြို့အစီအစဉျကို သသေခြောဆှဲထားသလားထငျရပါတယျ... ခုနျခဖြို့ ခေါငျမိုးစှနျကိုမသှားခငျ လကျဗှရောမကနျြအောငျ နှုတျဆကျစာဆနျဆနျရေးခဲ့သလို ဝိုငျပုလငျးတှမေနကျစာစားတုနျးက ကနျြခဲ့တဲ့လကျဗှရောတှကေိုပါ ရှငျးခဲ့ပါသေးတယျ...ဒီလိုခုနျခဖြို့ စီစဉျနတေုနျးမှာ နဈကတျစီဒီ ရဲ့နောကျကွောငျးကို တဈခကျြပွတယျ...သူကအရငျကရဲဖွဈဖူးခဲ့ပွီး ပွဿနာတဈခုကွောငျ့ ထောငျ(၂၅)နှဈကသြှားတယျ...ခုတော့ လူစညျကားလှနျးတဲ့မွို့လယျခေါငျရဲ့ ဟိုတယျတဈခုပျေါမှာ ခုနျခဖြို့ကွိုးစားနပေါတယျ... ခုနျခဖြို့ကွိုးစားတာက တခွားကွီးမားတဲ့အစီအစဉျကွီးအတှကျ အစိတျအပိုငျးတဈခုမြားဖွဈလမေလား.... ဒီကားက အီသှားတဲ့နရောမရှိဘူး...ဇာတျလမျးစစခငျြးလူတဈယောကျတိုကျပျေါခုနျခဖြို့ကွိုးစားတယျ..ပွီးတော့သူနောကျကွောငျးကိုတဈခကျြပွတယျ...အကျရှငျခနျးတှနေဲ့ ဇာတျကိုပုံဖျောသှားတာ...ကိုယျတိုငျလိုကျလံအဖွထေုတျရငျးဇာတျလမျးက တဖွညျးဖွညျးရုပျလုံးပျေါလာသလို အစကနအေဆုံးထိ ကွညျ့ရငျး ကိုယျပါ ဇောခြှေးပွနျလာတဲ့ဇာတျကားမို့ ကနျြတဲ့ဟာတှမေပွောတော့ပါဘူး...နညျးနညျး Spoiler လုပျတာနဲ့ ရသပကျြသှားနိုငျတဲ့ကားမို့ပါ.... ဇာတျလမျးအညှနျးနဲ့ ဘာသာပွနျသူကတော့ Hein That Naing ပဲဖွဈပါတယျ.... File ...
IMDB: 6.8/10 141059 votes
The Grudge (2020) ရုံတင်ထားတဲ့ သရဲကားတစ်ခုကို တင်ပေးထားပါတယ်။ Jump scare အများစုကို သုံးထားတာမို့ အသည်းငယ်ရင်တော့ မကြည့်သင့်ပါဘူး။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ခင်ပွန်းသေဆုံးသွားလို့ သားတစ်ယောက်နဲ့ အိမ်ပြောင်းလာတဲ့ စုံထောက် မူဒွန်ဟာ ထူးဆန်းတဲ့ လူသေမှုတစ်ခုကို စုံစမ်းရင်း ကြောက်စရာအိမ်ကြီးတစ်လုံးထဲက ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ အဲဒီအိမ်ကြီးထဲမှာ အစဉ်အဆက် သေဆုံးခဲ့ကြတဲ့သူတွေအကြောင်းကိုသိလာပြီး မူဒွန်ဆီကိုပါဒီအန္တရာယ်တွေရောက်လာတဲ့အခါ ဒီကိစ္စတွေရဲ့ ဇစ်မြစ်ကိုရှာပြီး အန္တရာယ်တွေကို ကျော်လွှားဖို့ကြိုးစားရပါတော့တယ် File Size : (877 MB , 322 MB ) Quality : WEB-DL 720p Running Time : 1 hr 34 min Format : Mp4 Genre : Horror , Thriller Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by ...
IMDB: 4.1/10 6543 votes
The Hot Spot (1990) IMDb (6.4) / Rotten Tomatoes (71%) ဟယျရီမကျဒေါ့ဈဟာ တက်ကဆကျက မွို့ငယျလေးတဈခုကို အခွလောခတြဲ့ တဈနယျသား တဈယောကျပါ။ သူ့ နောကျကွောငျးကို ဘယျသူမှ မသိရသလို ဘာအကွံအစညျတှသေယျဆောငျလာမလဲ မယုံကွညျရသူတဈယောကျ။ ကားဟောငျး အရောငျးသမားတဈယောကျအဖွဈ လုပျကိုငျနရေငျး ပိုငျရှငျဖွဈသူရဲ့ ဇနီးနဲ့ ပှရှေုပျသလို စာရငျးကိုငျမိနျးမလှလေး ဂလိုရီယာ(ဂနြီဖာကျောနယျလီ)ကိုလဲ အလှတျမပေးပါဘူး။ တကယျတမျး သူ့ရညျရှယျခကျြက မွို့ရဲ့ ဘဏျတိုကျကိုလုယကျဖို့ပါပဲ။ အဲ့ဒီအခြိနျမှာပဲ စာရငျးကိုငျမိနျးမလှလေး ဂလိုရီယာဟာ မွို့စှနျမှာ နထေိုငျတဲ့ ခပျပပေလေူတဈယောကျရဲ့ ငှညှေဈခွိမျးခွောကျမှုကို ခံနရေပါတယျ။ ဒါတှရေဲ့ နောကျကွောငျးက ဘယျလိုရှိလဲ။ နယျလှညျ့ပွီး ဖြံကလြာတဲ့သူတဈယောကျအတှကျ ဒီနယျမွို့ငယျလေးမှာ သူ့ထကျလညျတဲ့သူ ရှိနမေလား။ လြှို့ဝှကျခကျြကိုယျစီနဲ့ လူတဈစု တဈယောကျအပျေါတဈယောကျ ပိပိရိရိလှညျ့ဖြားကွပုံတှကေိုစိတျဝငျစားစရာမွငျရပါလိမျ့မယျ။ ဂနြီဖာကျောနယျလီဆို တဈလောတုနျးက gif တှမှော ခတျေစားသှားတဲ့ သိပျလှတဲ့ မမတဈယောကျမွငျးစီးနပေုံလေးကိုမှတျမိကွမှာပါ။ အဲ့ဒီကားတုနျးက ဘာဆိုဘာမှ မပါလို့မကနြေပျကွသူတှေ ဒီကားမှာတော့သူ့ရဲ့ မိမှေးတိုငျးဖမှေးတိုငျးအလှတှတေဈဝကွီးမွငျရပါလိမျ့မယျ။ ဒါကွောငျ့ မိသားစုနဲ့တူတူကွညျ့ဖို့တော့မသငျ့တျောတဲ့ဇာတျကားဖွဈပါတယျ။ (Zawgyi) ဟယ်ရီမက်ဒေါ့စ်ဟာ တက္ကဆက်က မြို့ငယ်လေးတစ်ခုကို အခြေလာချတဲ့ တစ်နယ်သား တစ်ယောက်ပါ။ သူ့ နောက်ကြောင်းကို ဘယ်သူမှ ...
IMDB: 6.4/10 9,613 votes
The Green Mile (1999) ကျမတို့ ဂြိုဟ်ကမ္ဘာမှာ တရားသဖြင့် ဆိုတဲ့စကားဟာ တကယ်ရှိရဲ့ လား။ လူသားတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နှိပ်စက်သတ်ဖြတ်ကြတာ ၊ အားငယ်သူကို အားကြီးသူက ညှဉ်းပန်းတာ ၊ မတရားမှုမှန်းသိသိကြီးတောင် ဝင်မစွက်ရဲတာ / ဝင်စွက်ဖို့ ရာ အင်အားမလုံလောက်တာ ။ ကျမတို့ မျက်စိရှေ့ လေးတင်မှာပဲ မတရားမှုကို တွန်းလှန်နိုင်တဲ့ အင်အား နည်းပါးလို့ကျရှုံးခဲ့ရပြီးသူတွေ ဘယ်လောက်လောက် ရှိနေပြီလဲ။ ကျမတို့တတ်နိုင်သရွေ့ ကယ်တင်ခဲ့လား။ မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်ခဲ့ကြလား။ ဒါမှမဟုတ် ရှင်ဟာ တစ်ပါးသူနာကျင်မှုအကြီးစားနဲ့ညည်းတွားနေတာကို လျှာလေးတသပ်သပ်နဲ့အရသာခံကြည့်တတ်သူလား။ ကဲ အခု ကျမဇာတ်ကားဟောင်းတစ်ခုအကြောင်း နည်းနည်း ပြန်ပြောပြမယ်လေ။ The Green Mile ဆိုတဲ့ ခြောက်အုပ်တွဲ ဝတ္ထုထဲက ပထမတွဲကို ၁၉၉၆ ခုနှစ် မာ့ခ်ျလကုန်လောက်မှာ စထုတ်တယ်။ ထုတ်ထုတ်ပြီးချင်းပဲ ဒုတိယတွဲအတွက် လူတွေ အုတ်အော်သောင်းနင်း ရင်ခုန်ကြသတဲ့။ ဒါနဲ့စာရေးဆရာ Stephen King ရဲ့The Green Mile အခန်းဆက်ဝတ္ထုရှည်ဟာ ကမ္ဘာကျော်သွားခဲ့တယ်။ ၁၉၉၉ ဒီဇင်ဘာမှာ စကြဝဠာရဲ့ အကောင်းဆုံး ဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကိုပဲ ထုတ်လုပ်တယ်လိ့ ကြေငြာထားတဲ့ Warner Bros ...
IMDB: 8.6/10 1,031,668 votes
Bill & Ted’s Bogus Journey(1991) Bill & Ted's Bogus Journey(1991) ၁၉၈၉ကားမှာတော့ ဘီလ်နဲ့ တက်ဒ်တို့ဟာ သူတို့လုပ်ချင်ရာတွေလုပ် မွှေချင်ရာတွေမွှေခဲ့လို့ ထူးထူးခြားခြားကြီးပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ကုန်တယ်... ဒီပြောင်းလဲမှုကြီးကိုမကျေနပ်တဲ့ အခြားအဖွဲ့အစည်းဟာ သူတို့ပုံတူစက်ရုပ် ၂ရုပ်ဖန်တီးပြီး ဘီလ်နဲ့ တက်ဒ်တို့ရဲ့ အတိတ်ကို ဖျက်ဆီးဖို့ စေလွှတ်လိုက်ပါတယ်... လူဆိုး ဘီလ်နဲ့ တက်ဒ် လူကောင်းဘီလ်နဲ့တက်ဒ်တို့ ဘယ်လို အလွဲလွဲတွေဖြစ်ကြဦးမလဲဆိုတာကိုတော့ ဆက်လက်ခံစားကြည့်ကြပါဦး... ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူကတော့ Alias ပဲဖြစ်ပါတယ်... File Size : (850 MB) and (345 MB) Quality : Blu-Ray 720p Format…mp4 Duration…01:33:00 Genre : Adventure, Comedy, Fantasy Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Alias Encoded by Phyo Pyae
IMDB: 6.3/10 58,306 votes
The Highwaymen(2019) The Highwaymen(2019) IMDb...7.1 တောအုပ်တစ်ခုရဲ့ နေရာတစ်ခုတွင် ထောင်သားတွေအလုပ်လုပ်နေကြသည်.... မြင်းကိုယ်စီ ဖြင့် လက်နက်ကိုင် ထောင်စောင့်အဖွဲ့တွေလည်း အသီးသီးစောင့်ကြတ်နေကြသည်... သို့ပေမယ့် ကြိုတင်စီစဉ်မှုတွေကြောင့် ထောင်သားတစ်ချို့ဟာ ၀ှက်ထားတဲ့ လက်နက်များဖြင့် ထောင်စောင့်များကို သတ်ဖြတ်ကာ သူတို့အား လာခေါ်သည့် ကားဖြင့် ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားကြသည်... ပြေးနိုင်သည့် လမ်းများကိုလိုက်လံပိတ်ဆို့ထားသော်လည်း အစအနပင်ရှာမရချေ.... ဒါတွေအားလုံးရဲ့အဓိက တရားခံက ၀ရမ်းပြေးလင်မယား(၂)ယောက်ဖြစ်သည်.. တကယ်တော့ သူတို့ကိုဖမ်းမမိသည်မှာ (၂)နှစ်ခန့်ပင်ရှိနေသည့်အပြင် ယ္ခုအခါ တခြားရာဇ၀တ်သား အပေါင်းအပါတွေပါ ထောင်ကလာခေါ်ထုတ်သည့်အတွက် သတင်းစာခေါင်းကြီးပိုင်းမှာ ခမ်းခမ်းနားနားကြီးကိုပါလာခဲ့လေသည်.. ဒီ့အတွက်ကြောင့် အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းက လူကြီးတွေ ခေါင်းမီးတောက်နေသည်... နောက်ဆုံးတော့ အစည်းအဝေးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ယခင်ကဖျက်သိမ်းခဲ့သည့် ရန်းဂျားတပ်ဖွဲ့ဝင်(၂) ဦးကို ပြန်လည်တာဝန်ပေးအပ်ဖို့ဖြစ်သည်...ရှေးယခင်က ရိန်းဂျိန်းတွေဟာ ဖမ်းမမိတဲ့သူတွေကို တရားဝင်သတ်ဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်..အုပ်ချုပ်ရခက်သည့် ရိန်းဂျားတွေဟု ယူဆက အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်.. ယ္ခုအခြေအနေမှာတော့ ကျန်ရှိနေသေးသည့် အတော်ဆုံး(၂)ယောက်ကိုခေါ်သုံးဖို့ဖြစ်လာသည်... ကိုင်း သူတို့ ဖမ်းမိနိုင်မလား....ဒီရာဇ၀တ်သားတွေကရော ဘယ်လိုမကောင်းမှုတွေဆက်ကျူးလွန်ဦးမလဲ... ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး...မင်းသားကြီး Kevin Costnerနဲ့ Woody Harrelsonတို့အဓိကပါဝင်ထားသည့် အပြင် IMDbလည်းအကောင်းဆုံးအနေအထားမှာရှိနေသည့် မှုခင်းဇာတ်ကားမို့ ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးပါရစေ... ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ Yoonwahwah Theint ပဲဖြစ်ပါတယ်... File Size : (1GB) and (357MB) Quality : ...
Die Hard2(1990) ခရစ်စမတ်နဲ့ နယူးရီးယားနီးလာလို့ ဘာဇာတ်ကားကြည့်မလဲဆိုရင် ကျွန်တော်ကတော့ Die Hard ဇာတ်ကားတွေကိုပဲ ပြေးမြင်ပါတယ်။ မင်းသားကြီး ဘရုစ်ဝီလီ ရဲ့အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားတွေလို့ဆိုရင်လဲ Die Hard ဇာတ်ကားတွေကိုပဲ အရင်ဆုံးပြေးမြင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော် ကလေးဘဝကတည်းက ကာတွန်းဒီရဲဂျာရဲ့ ကာတွန်းတွေဖတ်ရင်း ဒီဇာတ်လမ်းတွေကိုရင်းနှီးနေပါတယ်….နည်းနည်းအရွယ်ရောက်လာတော့ ဇာတ်ကားတွေကိုမျက်မြင်ကြည့်ရတော့လဲ ထိုင်ရာမထကြည့်မိတာချည်းပါပဲ။ အထူးသဖြင့် တုံးတိုက်တိုက်ကျားကိုက်ကိုက် စိတ်ထဲရှိသလိုပြောတတ်တဲ့….. အကြောက်အလန့်ကင်းတဲ့….. ဂျွန်မက္ကလိန်းဆိုတဲ့ ဇာတ်ကောင်ကို ပြသနာတွေ အန္တရာယ်တွေကြုံတိုင်း..သိမ်ငယ်စိတ်တွေဝင်လာတိုင်း အမှတ်ရမိတာ အမှန်ပါ။ Die Hard ဇာတ်ကားတွေဟာ အခုချိန်ထိ စုစုပေါင်း ၅ ကားထွက်ထားပါတယ်။တစ်ကားနဲ့တစ်ကားဟာ အနည်းငယ်တော့အဆက်အစပ်ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့် ၅ ကားလုံးကိုစုစည်းတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။တစ်ကားချင်းစီရဲ့အညွှန်းတော့မပေးတော့ပါဘူး။မိတ်ဆွေတို့ကြည့်ဖူးပြီးသားဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ဂျွန်မက္ကလိန်းရဲ့ အရသာကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လည်ခံစားကြည့်ကြပါဦး။သေချာပေါက် အရသာရှိနေဦးမှာပါ။ BluRay 1080p 5.1 Audio နဲ့ ပြန်လည်တင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Die Hard2(1990) IMDb (7.1) / Rotten Tomatoes (69%) John McClane is an off-duty cop gripped ...
IMDB: 7.1/10 291,431 votes
The Shawshank Redemption(1994) The Shawshank Redemption (1994) 91% Rotten Tomatoes 9.3/10 IMDb မိတ်ဆွေတို့ Google မှာ IMDb rating အမြင့်ဆုံးကားများ လို့ ရိုက်ရှာကြည့်ချင်ပါသလား? Rotten tomatoes ရဲ့ အကောင်းဆုံးကားများလို့ ရိုက်ရှာကြည့်ချင်ပါသလား? ရုပ်ရှင်သမိုင်းတလျှောက်အကောင်းဆုံးကားများ.....မသေခင်ကြည့်သင့်သော ကားများ....ဘာညာသာရကာ အစုံရိုက်ပြီး ရှာကြည့်လိုက်ပါ။ ဒီဇာတ်ကားကတော့ ထိပ်ပိုင်းတစ်နေရာမှာ အမြဲပါနေပါလိမ့်မယ်။ ဇာတ်လမ်း အကျဉ်းလေးကတော့ ရိုးရှင်းပါတယ်။ လူသတ်မှုနဲ့ ထောင်ဒဏ် တစ်သက် ၂ ခါ ကျခံရပြီး ရှောရှန့်ခ် ထောင်ထဲကို ရောက်လာတဲ့ ဘဏ်စီးပွားရေးသမား အန်ဒီ ဒူဖရင်း(Tim Robbins) နဲ့ တကျွန်းသမားဟောင်းကြီး ရက်ဒ်(Morgan Freeman) တို့ ရဲ့ ထောင်ထဲက အခက်အခဲတွေနဲ့ မိတ်ဆွေဘ၀၊ အန်ဒီရဲ့ ငရဲလို မျှော်လင့်ချက်မရှိတဲ့ နေရာမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘယ်လိုတည်ဆောက်ပြီး နေထိုင်သွားလဲ၊ လွတ်မြောက်မှုကို ဘယ်လိုရှာဖွေသွားလဲ ...
IMDB: 9.3/10 2,005,476 votes
Eagle Eye (2008) အေးအေးနေတတ်တဲ့ ကော်ပီ ကူးတဲ့ အလုပ်သမား ဂျယ်ရီရှော တယောက် က အမေရိကန် လေ တပ်ကနေ ထွက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်၊ သူနဲ့ အရမ်းတူတဲ့ သူ့အကို အီသန်ရှော ဟာ ရုတ်တရက် ဆုံးပါးသွားတဲ့နောက် မှာ သူ့အရမ်း ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ အိမ်လခတောင် မှန်မှန်မပေးနိုင်တဲ့ ဂျယ်ရီရှော ရဲ့ ဘဏ်အကောင့်ထဲမှာ ဒေါ်လာ ၇ သိန်း ကျော်ရောက်ရှိလာပါတယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ သူ့အခန်းထဲမှာ လက်နှက်တွေ ၊ ခဲယမ်းမီးခြောက်တွေနဲ့ ပစ္စည်း ပစယတွေ မဖိတ်ခေါ်ဘဲ ရောက်ရှိလာပါတယ်။ သူသိပ်အံ့အားသင့်သွားတဲ့အချိန်မှာဘဲ သူ့လက်ကိုင်ဖုံးကို တဦးတယောက် က လှမ်းခေါ်ပါတယ်။ ကိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ဂျယ်ရီ့ အိမ့်ကို နောက် ၄ မိနစ်အတွင်း မှာဘဲ FBI က ၀င်ရောက်စီးနင်းတော့ မှာ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ၊ ဒါကြောင့် အခုဘဲ လွတ်အောင်ပြေးဖို့နဲ့ ပြေးဖို့နေရာကို ညွှန်ကြားပါတော့တယ်။ ဂျယ်ရီတယောက် မယုံမရဲဖြစ်နေစဉ်မှာဘဲ ၄ မိနစ်ပြည့်သွားတဲ့အတွက် FBI ကနေ တရားမ၀င်လက်နှက်တွေ သိုလှောင် ထားတဲ့ ဂျယ်ရီ့ကို ၀င်ရောက်ဖမ်းစီးပါတော့တယ်။ သူနဲ့တချိန်ထဲမှာဘဲ ...
The Mist (2007) ဒီလို မိုးအေးတဲ့ ညမျိုးမှာ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်စွာဖြင့် တင်ပေးချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားတော့ ရှိပါတယ် နာမည်ကျော် စာရေးဆရာကြီး Stephen King ရဲ့ ၀တ္တုကို ရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်ထားတဲ့ The Mist ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားပါ ဒီဇတ်လမ်းကို ကြည့်မယ်ဆို အရင်ဆုံး မီးတွေ မှိတ်လိုက်ပါ ပြီးရင် လဖ္ဘက်သုပ် ဖြစ်ဖြစ် စားစရာ တစ်ခုခု အနားယူပါ စောင်ကို ကွေးနေအောင် ခြုံပါ (FA ဆိုရင်ပေါ့) :P ကိုယ့်အနားမှာ ဖက်စရာခွေးလေး ကြောင်လေးတွေ ရှိရင် ဖက်ထားပါ ဒါမှမဟုတ် ချစ်သူ ရှိရင် လက်မောင်းကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဖက်ထားပါ ပြီးရင် ဒီရုပ်ရှင်ကို စ ကြည့်လို့ရပါပြီ... တစ်နေ့သော ညမှာ မြို့ငယ်လေး တစ်ခုရဲ့ ဆိုးရွားလှတဲ့ မုန်တိုင်း ၀င်ရောက် တိုက်ခက်တဲ့ အချိန် ရေကန်ငယ်လေး ရဲ့ နံဘေးက ပန်းချီဆရာ ဒေးဗစ် ရဲ့ အိမ်ကို သစ်ပင်ပိကာ Studio ခန်း ပြိုကျသွားခဲ့ပါတယ် မနက်ခင်း မှာတော့ ဒေးဗစ် တို့ မိသားစု နိုးလာတဲ့ အခါမှာတော့ အရာအားလုံးဟာ မြူခိုးစတွေ ဖုံးလွှမ်းနေတာကို တွေ့ရပြီး အပျက်အစီးတွေကို ရှင်းလင်းကြရပါတယ် သဘာဝ ဘေးကို ရင်ဆိုင်ဖို့ အတွက် အစားအသောက်က ...
IMDB: 7.2/10 246,460 votes